Ramón M.ª del Valle-Inclán। उनको जन्म जयन्ती। टुक्राहरू | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | 28/10/2021 11:00 | लेखकहरू, साहित्यको इतिहास, धेरै
रामोन मारिया डेल भाले Inclán उहाँ आजको दिन जस्तै 1866 मा Villanueva de Arosa मा जन्म भएको थियो। उनी को हिस्सा थिए Of Gene को जेनेरेसन र उनको व्यापक काम (उनले थिएटर, कविता, कथा र उपन्यास खेती गरे) आधुनिकता भित्र फ्रेम गरिएको छ। विकास र कल प्रचार विचित्रसंग बोहेमियन बत्तीहरू सबैभन्दा प्रतिनिधि र प्रसिद्ध शीर्षकको रूपमा। जस्ता शीर्षकमा हस्ताक्षर पनि गरे ईश्वरीय शब्द, तानाशाह झण्डा o कार्निवलको मंगलबार। यो एक हो चयन याद गर्न टुक्राहरू।
1 Ramón María del Valle Inclán - टुक्राहरू
1.1 छायादार बगैचा
1.2 शरद सोनाटा
1.3 बोहेमियन बत्तीहरू
Ramón María del Valle Inclán - टुक्राहरू
मैले प्रिस्बिटेरीमा बत्तीमुनि प्रार्थना गर्दै एउटा छायाँ मात्र बनाएको थिएँ: त्यो मेरी आमा थिइन, हातमा खुला किताब समातेर र शिर निहुराएर पढ्दै। बेलाबेलामा हावाले अग्लो झ्यालको पर्दा हल्लाउँदै गयो। तब मैले आकाशमा देखेँ, पहिले नै अँध्यारो, चन्द्रमाको अनुहार, पहेंलो र अलौकिक देवी जस्तै जङ्गल र तालहरूमा उनको वेदी छ ... म डराएको थिएँ जस्तो कि म कहिल्यै भएको छैन, तर मैले चाहिन। मेरी आमा र मेरा दिदीहरूले मलाई कायर ठान्थे, र म चान्सेलको बीचमा स्थिर उभिएँ, मेरा आँखा आधा खुला ढोकामा अडिए। बत्ती बल्यो । माथिल्लो भागमा झ्यालको पर्दा हिल्यो, र बादलहरू चन्द्रमामा गए, र ताराहरू हाम्रो जीवन जस्तै अन र बन्द भए।
म उनको सुत्ने कोठामा पुगें, जुन खुला थियो। त्यहाँ अन्धकार रहस्यमय, सुगन्धित र न्यानो थियो, मानौं कि यसले हाम्रो मितिहरूको बहादुरी गोप्य राखेको थियो। त्यसबेला उसले कस्तो दुखद रहस्य राख्नुपर्छ! होसियार र विवेकी भएर मैले कोन्चाको शवलाई उनको ओछ्यानमा छाडिदिएँ र आवाज नगरी बाहिर निस्किएँ। ती जमेको ओठमा अन्तिम चुम्बन राख्न फर्केर जाने कि नपर्नेमा शंका लाग्यो: मैले प्रलोभनको प्रतिरोध गरें। यो एक रहस्यवादी को स्क्रूल जस्तै थियो। मलाई डर लाग्यो कि त्यो उदासीनतामा केही अपमानजनक छ जसले मलाई छक्क पार्यो। उसको सुत्ने कोठाको न्यानो सुगन्धले ममा यातना जस्तै, इन्द्रियहरूको स्वैच्छिक सम्झना जलायो।
अधिकतम: डन ल्याटिनो डे हिस्पालिस, विचित्र चरित्र, म तिमीलाई उपन्यासमा अमर बनाउनेछु!
डन ल्याटिनो: एक त्रासदी, मैक्स।
अधिकतम: हाम्रो त्रासदी कुनै त्रासदी होइन।
डन ल्याटिनो: ठीक छ, केहि हुनेछ!
डन ल्याटिनो: आफ्नो मुख न मोड्नुहोस्, म्याक्स।
अधिकतम: म चिसो छु!
डन ल्याटिनो: उठ्नुहोस्। आउनुहोस् एक पैदल यात्रा गरौं।
अधिकतम: म सक्दिन।
डन ल्याटिनो: त्यो क्यारेड रोक्नुहोस्। आउनुहोस् एक पैदल यात्रा गरौं।
अधिकतम: मलाई तपाईंको सास दिनुहोस्। तिमी कहाँ गयौ, ल्याटिनो?
डन ल्याटिनो: म तिम्रो छेउमा छु।
अधिकतम: तिमी गोरुमा परिणत भएकाले मैले तिमीलाई चिन्न सकिन। मलाई तिम्रो सास दिनुहोस्, बेलेनिता डुँडको प्रख्यात गोरु। Muge, ल्याटिनो! तिमी हल्टर हौ, र यदि तिमीले मुस्कुरायो भने, एपिस गोरु आउनेछ। हामी उहाँसँग लड्नेछौं।
डन ल्याटिनो: तपाईं मलाई डराउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मजाक बन्द गर्नुपर्छ।
अधिकतम: अल्ट्रास्टहरू फोनी हुन्। विचित्र गोया द्वारा आविष्कार गरिएको थियो। क्लासिक नायकहरू बिरालाको गल्लीमा हिड्न गएका छन्।
डन ल्याटिनो: तपाईं पूर्ण रूपमा दही हुनुहुन्छ!
अधिकतम: अवतल ऐनामा प्रतिबिम्बित क्लासिक नायकहरूले एस्परपेन्टो दिन्छ। स्पेनिश जीवनको दुखद अर्थ केवल एक व्यवस्थित विकृत सौन्दर्य संग मात्र हुन सक्छ।
डन ल्याटिनो: म्याउ! तपाईं यसलाई समात्दै हुनुहुन्छ!
अधिकतम: स्पेन युरोपेली सभ्यताको विचित्र विकृति हो।
डन ल्याटिनो: सक्छ! म आफैलाई रोक्छु।
अधिकतम: अवतल ऐनामा सबैभन्दा सुन्दर छविहरू बेतुका छन्।
डन ल्याटिनो: सहमत। तर Calle del Gato मा आफूलाई ऐनामा हेर्न पाउँदा मलाई रमाइलो लाग्छ।
अधिकतम: र म। विरूपण बन्द हुन्छ जब यो पूर्ण गणितको विषय हो। मेरो हालको सौन्दर्यशास्त्र भनेको अवतल दर्पण गणितको साथ शास्त्रीय मापदण्डहरू परिवर्तन गर्नु हो।
मेरो जिन्दगी टुट्यो ! लडाईमा
धेरै वर्षको मेरो सासले बाटो दिन्छ,
र घमण्डीहरूले सोचेका थिए
मृत्युको विचारले उसलाई सताउँछ।
म भित्र पस्न चाहन्छु, मसँग बस्न चाहन्छु,
मेरो निधारमा क्रस बनाउन सक्षम हुन,
र मित्र वा शत्रुलाई थाहा छैन,
अलग सेट गर्नुहोस्, भक्तिपूर्वक बाँच्नुहोस्।
जहाँ उचाइको हरियो दिवालियापन
बथान र संगीतकार गोठाला संग?
यति पवित्र दर्शनको आनन्द कहाँ लिने
आत्मा र फूलहरूलाई के दिदीबहिनी बनाउँछ?
जहाँ शान्तिमा चिहान खन्ने
र मेरो पीडा संग रहस्यमय रोटी बनाउन?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » Ramón M.ª del Valle-Inclán। उनको जन्म जयन्ती। टुक्राहरू